Shabelle Media Network – Maamulka Degmada Afgooye oo faah faahin ka bixiyay xaaladda Degmadaasi HOME
Maamulka Degmada Afgooye oo faah faahin ka bixiyay xaaladda Degmadaasi
maalik_som March 4, 2013
Afgooye (Sh.M.Network)—Guddoomiye Ku xigeenka Degmada Afgooye Dhinaca Amniga iyo Siyaasadda Mahdi Axmed Xasan oo maanta wareysi Gaar ah Siinayay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyay Xaaladda Ammaan ee Degmadaasi.
Guddoomiyaha Ku Xigeenka ayaa sheegay in haatan Ammaanka Degmadaasi uu yahay mid la isku halleyn karo isagoo tilmaamay in Xilliyada Habeenkii ciidamada Dowladda ee ku sugan Duleedka Degmadaasi Afgooye ay sameeyaan Howl Gallo ay ku sugayaan Ammaanka islamarkaana ay kaga hortagayaan wax uu ugu yeeray Kooxaha Nabadiidka.
Mahdi Axmed Xasan ayaa waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay ay dhibaatooyin Culus ka tagnaayeen wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye balse haatan ay soo hagaageyso.
Guddoomiye Ku Xigeenka dhinaca Amniga iyo Siyaasadda Mahdi Axmed Xasan oo hadalkiisa sii amba qaadayay ayaa dhanka kale waxa uu walaac Xoogan ka muujiyay Xaaladda Beni Aadmi nimo ee ka taagan Degmada Afgooye iyo Deegaanada ku geedaaman.
Guddoomye Ku xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in Degmada ay ku soo barakeceen Kumanaan kun oo qoys kuwaasi oo ka soo cararay Abaarihii xooganaa ee ku dhuftay Koofurta Soomaaliya isagoo sheegay in illaa haatan hay’adaha samafalka aysan wax deeq ah soo gaarsiin dadkaasi.